ပွညျသူ့ ဝနျထမျး တှေ အတှကျ ခုလောလော ဆယျမှာ လှူလို့ရ တဲ့ နရောလေးတှေ ကို ပွောပွ ပေးလာ တဲ့ ပိုငျဖွိုးသု – Let Pan Daily
ပွညျသူ့အခဈြတျော တဈဦးဖွဈတဲ့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး ပိုငျဖွိုးသု ကတော့ အနု ပညာလောကမှာ ဒိတျဒိတျကွဲ အောငျမွငျနတော ဖွဈပွီး အကယျဒမီဆုကိုပါ ဆှတျခူး သိမျးပိုကျထားတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ပရိသတျတှကေခဈြစနိုးနဲ့ချေါကွတဲ့ သုသုဟာ ဗီဒီယိုဇာတျကား ပေါငျးမြားစှာကို ရိုကျကူးခဲ့တာ ဖွဈပွီး ရုပျရှငျ ဇာတျကားကွီး တှဟော ဆိုရငျလညျး သူမရဲ့ သရုပျဆောငျ ထူးခြှနျမှုကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲ မှာစှဲကနျြနခေဲ့တာ ပဲဖွဈပါတယျနျော……။
သုသုဟာ မကွာသေးခငျက ဒါရိုကျတာ ဏကွီးနဲ့ ထိမျးမွားလကျထပျခဲ့တာ ဖွဈပွီး သာယာပြျောရှငျတဲ့ အိမျထောငျသညျ ဘဝကို အေးအေးခမျြးခမျြး ဖွတျသနျးနထေိုငျရငျး သူမခဈြတဲ့ အနု ပညာ အလုပျတှကေို အဆကျမပွတျ လုပျကိုငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။လတျတလောမှာတော့ သူမ လေးစား ခဈြခငျြရတဲ့ ပွညျသူတှနေဲ့ အတူ ရညျမှနျးထားတဲ့ ပနျးတိုငျဆီကို စိတျတူကိုယျတူ အားတတျသရော ပါဝငျ လုပျဆောငျနတောလညျး တှရေ့ပါတယျနျော…….။
သူမရဲ့လူမူကှနျယကျစာမကျြနှာထကျတှငျ “CDM မှာပါဝငျမယျပွညျသူ့ဝနျထမျးတှဘေကျမှာပွညျသူတှရှေိနမှောပါ….
‌အားလုံး နိုငျသလောကျ ဝိုငျးကူကွပါမယျ….ဒါအခုလောလောဆယျ သုသုတို့လှူလို့ရတဲ့ 21 Savage MM pageရဲ့ link ပါ…နောကျထပျသုသုတို့ကိုလာပွောထားတာလညျး၃နရော‌ရှိပါတယျ….Informationအတိအကပြေးလို့ရတဲ့အခြိနျကရြငျလှူခငျြနသေူအားလုံးဝိုငျးဝနျးလို့ရအောငျလကျတို့ပါမယျ….
https://www.facebook.com/21savagemm/”ဆိုပွီး လှူခငျြသူမြား ပါဝငျနိုငျအောငျ ဝမြှေပေး လာတာ ဖွဈပါတယျ။ခဈြပရိသတျတှကေလညျး သုသု ဝမြှေထားတာလေးကို ကွိုကျနှဈသကျ လိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ရငျး ပွနျလညျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
သတငျးအရငျးမွဈ: Paing Phyoe Thu FB Page
ပြည်သူ့အချစ်တော် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ပိုင်ဖြိုးသု ကတော့ အနု ပညာလောကမှာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ အောင်မြင်နေတာ ဖြစ်ပြီး အကယ်ဒမီဆုကိုပါ ဆွတ်ခူး သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ သုသုဟာ ဗီဒီယိုဇာတ်ကား ပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီး တွေဟာ ဆိုရင်လည်း သူမရဲ့ သရုပ်ဆောင် ထူးချွန်မှုကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲ မှာစွဲကျန်နေခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်……။
သုသုဟာ မကြာသေးခင်က ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနဲ့ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်သည် ဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြတ်သန်းနေထိုင်ရင်း သူမချစ်တဲ့ အနု ပညာ အလုပ်တွေကို အဆက်မပြတ် လုပ်ကိုင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။လတ်တလောမှာတော့ သူမ လေးစား ချစ်ချင်ရတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ ရည်မှန်းထားတဲ့ ပန်းတိုင်ဆီကို စိတ်တူကိုယ်တူ အားတတ်သရော ပါဝင် လုပ်ဆောင်နေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်…….။
သူမရဲ့လူမူကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်တွင် “CDM မှာပါဝင်မယ်ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေဘက်မှာပြည်သူတွေရှိနေမှာပါ….
‌အားလုံး နိုင်သလောက် ဝိုင်းကူကြပါမယ်….ဒါအခုလောလောဆယ် သုသုတို့လှူလို့ရတဲ့ 21 Savage MM pageရဲ့ link ပါ…နောက်ထပ်သုသုတို့ကိုလာပြောထားတာလည်း၃နေရာ‌ရှိပါတယ်….Informationအတိအကျပေးလို့ရတဲ့အချိန်ကျရင်လှူချင်နေသူအားလုံးဝိုင်းဝန်းလို့ရအောင်လက်တို့ပါမယ်….
https://www.facebook.com/21savagemm/”ဆိုပြီး လှူချင်သူများ ပါဝင်နိုင်အောင် ဝေမျှပေး လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်တွေကလည်း သုသု ဝေမျှထားတာလေးကို ကြိုက်နှစ်သက် လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်း ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သတင်းအရင်းမြစ်: Paing Phyoe Thu FB Page
သတိလစ် မေ့မျောနေရာက အားလုံးရဲ့ ဆုတောင်းမေတ္တာတွေနဲ့ အတူ ပြန်နိုးလာပြီ ဖြစ်တဲ့ ဦးမန်းဝင်း ရဲ့ ဗီဒီယို
ကိုဗဈ – သတျမှတျ စညျးကမျး မလိုကျ နာမှု ဖွငျ့ Banana မွဈသား မွို့မရဲစခနျး ၌ တိုငျကွား ခံရ
ဖြူဝင်းဥပြီး ရင်ခုန်စရာကောင်းလောက်တဲ့ အလှတရားတွေ နဲ့ ညို့ယူဖမ်းစား လိုက်ပြန်တဲ့ သဇင်ဦး